မြန်မာတွေကို အနိုင်ကျင့်ကုန်ပြီ Who made it ??? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » မြန်မာတွေကို အနိုင်ကျင့်ကုန်ပြီ Who made it ???
မြန်မာတွေကို အနိုင်ကျင့်ကုန်ပြီ Who made it ???
Posted by Foreign Resident on Sep 28, 2011 in History, Think Tank | 116 comments
“ မြန်မာတွေကို အနိုင်ကျင့်ကုန်ပြီ Who made it ??? ”
Recently, I sawalot of arguments in the “ မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲ တရုတ်တွေက မြန်မာတွေကို အနိုင်ကျင့်ကုန်ပြီ ”
Even, I don’t expected much from the average villagers,
But, some comments & ideas are ridiculous & senseless.
I amaChinese ( တရုတ်လူမျိုး ) borne in Myanmar.
I live in Australia & I like Australia,
But, I love Myanmar ( My mother Land ).
Chinese ( တရုတ်လူမျိုး ) didn’t make any mistakes.
Let say, they are right.
OK, to solve the problem, there are facts & opinions,
First, you have to sort out the real facts.
Second, remove the emotional opinions.
Facts in chronological order ;
ရှပ်ပြေးရေယာဉ် က ရေစုတ်တင်နေတဲ့ ရေပိုက်ခေါင်းတစ်ခုကို ၀င်တိုက်ပါတယ်၊
( ရှပ်ပြေးရေယာဉ် collided the ရေပိုက်ခေါင်း ( stationary ),
It clearly say, it was ရှပ်ပြေးရေယာဉ် mistake )
ရေပိုက်ခေါင်းကြီးဟာ ဘာမှ အပျက်အဆီး မရှိပေမယ်
At least, this accident delayed their operation,
If I were they, I will sue ရှပ်ပြေးရေယာဉ် for the compensation for operation delay.
ကုမ္မဏီလာဖွင့်တဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေ ထွက်လာပြီး
Nothing wrong, If I were they,
I will definitely scold ရှပ်ပြေးရေယာဉ်
Lucky you, they didn’t sue.
ရှပ်ပြေးယာဉ်ပေါ် ခရီးသည်အဖြစ်ပါလာတဲ့ ခရိုင်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေက
တရုတ် ခေါင်းဆောင်တွေကို သွားတောင်းပန်ှ တယ်၊
They ( ခရိုင်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေ ) don’t need to apology to တရုတ် ခေါင်းဆောင်တွေ
Because, they ( ခရိုင်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေ ) didn’t make mistake.
Wrongdoer is ရှပ်ပြေးရေယာဉ်
So, They ( ရှပ်ပြေးရေယာဉ် ) should apology to တရုတ် တွေ
ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ကိုဆက်လက် ထွက်ခွာခွင့် ပြုပါတယ်၊
It shows, They ( တရုတ်လူမျိုး ) are not bad people.
Some emotional opinions & unconfirmed facts are ;
ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ရဲ့ နံရံတွေကတော့ ပိန့်ရှုံ့သွားပါတယ်၊
ရှပ်ပြေးရေယာဉ် madeamistake
အံ့သြစရာက ပြသနာလာရှာတဲ့ တရုတ်တွေထဲမှာ
တရုတ်ရဲ ယူနီဖေါင်းဝတ်ထားတဲ့သူတွေလည်း ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်၊
All Chinese uniform are same in style.
Myanmar cannot identified which one is “တရုတ်ရဲ ယူနီဖေါင်း ”
ဒါနဲ့ ဒီတရုတ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းလောက်အထိ
ထုနဲ့ထည်နဲ့ ဘာကြောင့် ရောက်ရှိနေတာလဲလို့ စုံစမ်းတော့
ကသာခရိုင် ထီးချိုင့်မြို့နယ် မောင်းကုန်းရွာမှာ တရုတ်တွေက
သတ္တုရှာဖွေရေးအမည်ခံပြီး ( အမည်ခံပြီး ) ကုမ္မဏီလာဖွင့်ပါသတဲ့၊
Myanmar Government allowed/asked them to come.
But, I don’t know why Author use ( အမည်ခံပြီး ).
I doubt, what is his real intention.
ရွာခံတွေရဲ့လယ်မြေတွေကို အကုန် သိမ်းလိုက်တဲ့အထိ ကျယ်ပါသတဲ့၊
Don’t forget, Chinese ( တရုတ်လူမျိုး ) cannot occupy your land.
Myanmar government occupied your land &
gave it to Chinese ( တရုတ်လူမျိုး ).
လယ်သမားတွေက မကျေနပ်လို့ တရုတ်လူကြီးတွေကို သွားတောင်းပန်တော့
(မြန်မာနိုင်ငံရောက်တဲ့ တရုတ်တွေကို မြန်မာစစ်စစ်တွေက
ခင်ဗျားတိုကလယ်မြေတွေကို ၅သောင်းပေးတာတောင် ကျေးဇူးတင်ပါ၊
အစိုးရက လယ်မြေတွေကိုပိုင်တာ ခင်ဗျားတို့လယ်ကို ခင်ဗျားတို့မပိုင်ဘူး၊
အလကား မသိမ်းတာတောင်ကျေးဇူးတင် လို့ပြန်ပြောတယ်
ပိုပြီး ရင်နာစရာကောင်းတာက အဲဒီ တရုတ်စက်ရုံဝင်း အတွင်းမှာ
မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်က မြန်မာမိန်းကလေး ငယ်ငယ်နုနုလှလှရွရွတွေ
ဘာအလုပ်မှန်း မသိပေမယ့် တစ်လကို ၅သိန်းကနေ ၁၀သိန်းအထိပေးလို့
မန္တလေး ကာရာအိုကေက ကလေးမလေးတွေတောင်
Whether မြန်မာမိန်းကလေး ငယ်ငယ်နုနုလှလှရွရွတွေ or not,
( As long as, it is not slavery nor forced labor )
( You may know, who frequently made forced labor )
By the way, I would like to answer those comments ;
“ မြန်မာစကားတောင်မတတ်ဘူး ”
Is it necessary to understand “ မြန်မာစကား ”
Some Kachin, Shan, Wa & some ethnic minorities cannot speak “ မြန်မာစကား ”
This is one type of racial discrimination.
those Kachin, Shan & other ethnic minorities hate Myanmar & fight against Myanmar.
Kindly ask, Kachin & Shan, I am definitely sure,
They really hate ( hate ) Myanmar more than Chinese.
“ လူမိုက်တွေ ဘယ်ရောက်နေကြလဲ ”
“လူမိုက်တွေ ” also afraid the gun & bullets,
So, they already flee earlier & faster than you.
The biggest thing they can do, might be posting comments by anonymous.
The only person you can rely on might be “ အမျိုးချစ်တဲ့လူတွေ ”
“ အမျိုးချစ်တဲ့လူတွေ ဘယ်ရောက်နေကြလဲ ”
Militry regime Killed & imprisoned them all.
If you want to see them ( အမျိုးချစ်တဲ့လူတွေ ),
Go & find them in graveyards & jails & abroad.
This post is too long now & I am tired of writing.
Chinese generally speak very loudly &
Even their natural conversation looks like fighting &
Some Chinese can be said rude & arrogant.
I understand your ( Myanmar ) feeling :
Chinese becomes rich & rich & rich &
Myanmar becomes poor & poor & poor
This made Chinese to be arrogant.
But, you must see the main/root cause of problem.
Your Myanmar government welcomed, invited & allowed them to do it.
If you want to blame,
blame only to Military Regime.
They allowed “ နိုင်ငံခြားသားတရုတ် ” to do by this way.
“ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတရုပ်ဆို ဖင်လေးလျှက်လိုက်
သူတို့ ( တရုတ်တွေ ) အပြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး
ဥိံးနောက်မရှိ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့
Moreover, don’t forget, In recent Era,
you cannot constructadeveloped nation with “ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု ”
ဘယ်လိုလုပ်လို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကို နည်းယူသင့်တယ် ”
“ လူဦးရေ စီးဆင်းရွေ့ပြောင်းမှုတွေကို.. တားဆီးလို့
အင်မတန်ခက်တဲ့ ..ရာစုနှစ်ထဲရောက်နေတာကိုး ”
I have Chinese blood, but,
I love Myanmar more than ( more than ) some so called Myanmars.
ထင်တာကို.. 30000 foot view ကပြောမယ်နော..
နောက်နှစ်ထဲ.. ယူအက်စ်က..မြန်မာပြည်ထဲ. အားနဲ့ဖိဝင်တော့မှာမို့.. အင်အားချိန်ခွင်ညှိဖို့.. စီအိုင်အေထောက်ပို့မှုနဲ့.. တရုတ်ပြည်မကို.. မုန်းတီးရေး.. တွန်းတင်ပေးလိုက်တယ်.. တွေ့မိတယ်..။
ဧရာဝတီကိစ္စမှာတော့. ဂီယာတဆင့်တင်သလို.. ဆက်မြှင့်တင်လိုက်တာပဲ…။
မြန်မာပြည်ထဲစီးပွားေ၇းနဲ့.. ဂျီအို သဘောအရ တဖက်သတ် မြင့်နေ(အသာစီးရနေ)တဲ့ တရုတ်ပြည်မကို ယူအက်စ်ကဒီလိုလာမညှိလို့လည်းမရဘူးလေ..
.. နိုင်ငံရေးသမားတွေ အနေမတတ်ရင်..(အဆုံးစွန်ပြောရရင်) တိုင်းပြည်က.. နေရင်းထိုင်ရင်း.. မဟာအင်အားကြီး၂ခုကြား..ကြားညှပ်သွားလိမ့်မယ်..။
ရွာသားတွေထဲ.. ပွင့်လင်းမြင်သာသိသာကြစေချင်လို့.. … လူမျိုးခွဲခြားတဲ့စာတွေကို.. လွှတ်ထားလိုက်တာပါ…။
စိတ်ထဲရှိတာ..ရေးကြတာ ကောင်းပါတယ်.။ နိုင်ငံရေးသမားတွေ..Officials တွေ.. ပိုသိနိုင်..စဉ်းစားနိုင်မယ်ပေါ့…။
မြန်မာပြည်ကို.. ချစ်ကြတာချင်းအတူတူသမားတွေ.. ဒါလေးတော့ သိထားစေချင်တယ်..။
ကဲ ကဲ ..တော်ကြပါတော့။ မင်းသခင်လည်းတော် ဦးဖောရိန်းလည်ရပ် စီအိုင်အေထောက်လှမ်းရေး ဦးခိုင်လည်း ဝင်မပါနဲ့တော့၊ လခွမ်းထဲမှပဲ ပေးထားတဲ့ မှတ်ချက်၈၀ကျော်ထဲမှာ သူတို့နာမည်ချည်ပဲ၊ ကွန်းမန့်အများဆုံးရထားတဲ့ ငါ့ပို့စ်ကို မကြာခင် ကျော်တက်သွားတော့မယ်။ ဒီလောက်တောင် ပြောချင်နေကြရင် ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ထောင်ပြောကြ။ ဟိုကောင် ဂျော်လကီအုပေါင်ကလည်း မူးလာရင် တမှောင့်။ တိတ်တိတ်နေ နောက်အသံကြားတိုင်း ဝင်မပါနဲ့…။
ခုပြောနေဆိုနေတာနဲ့ ပတ် သတ်ပြီးဆရာသာဓုရေးတဲ့ စာအုပ်တွေကို သွားသတ်ိရတယ်။ သူဒို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင်တော့ ကုန်ဈေးတန်းမှာနေတယ် အဲ့ဒီတုန်း က ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင်တော့ သခင်တွေထဲမှာ တရုပ်ကုလား အများကြီးပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ လူမျိူးဆိုတာကွဲပေ မဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာမွေးကြတာဆို တော့ ဒီနိုင်ငံသားပါပဲ၊ ဒီနိုင်ငံရဲ့ကောင်းမွေဆိုးမွေ တွေကို အားလုံးခံစားရမှပါ… နိုင်ငံခြားသားဆိုတာ က တော့သူ့နိုင်ငံ၊သူ့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို ပဲကြည့်မှာပါ။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပေါင်းအသင်းတွေကြားထဲ ပြောကြတဲ့ စကားလုံးအတိုင်းပြောပြချင်ပါတယ်၊
စကားလုံးအသုံးအနှုန်း မကြိုက်ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးပါ၊
ပါပါ့ကြွေးတွေက များတော့ ပါပါ့ဆွေမျိုးတွေ မကောင်းဘူး၊အိမ်သားတွေကလည်း မကြိုက်ဘူး၊
ပါပါနဲ့ လက်တွဲဖြုတ်ပြီး ဒက်ဒီနဲ့ ၀ဲလကမ်းချင်လို့ ဒီလို ပြဿနာတွေ ဖန်တီးလာတယ်လို့ပါ၊
Even you want to “ပါပါ (China) နဲ့ လက်တွဲဖြုတ်ပြီး ဒက်ဒီ (USA) နဲ့ ၀ဲလကမ်းချင်”,
But, the persisting problem is
you already owedalot of debits to China (ပါပါ့ကြွေးတွေက များတော့).
The facts is,
you have to pay it back,
OK, you can cancel the operation of “ မြစ်ဆုံ” Dam.
But, don’t forget, our Myanmar government already signed MOU
( memorandum of Understanding ) & construction agreement/contract with
Chinese Government & CPI Company.
It is notachild play.
In addition, Chinese Government/CPI already spentalot of money in it.
The worst might be, ” Chinese Government already calculated
this (would be get) Energy/electricity in their National Planning “.
Then, better think,
how can you please/compensate for their lost ( in money/in plan)
It is unavoidable & very clear,
You need to compensate “Billion Dollar Money” to China or
You need to offer another project bigger than “ မြစ်ဆုံ” Dam.
If you cannot please enough to ပါပါ (China).
It is quite sure, ပါပါ (China) will give Military, Logistic & Moral support to
our beloved “Wa & Moung La & Ko Kang”.
Then,alot of blood will be stain on our beloved Mother land.
That might be the situation, What “Kai (သဂျီး )” recently said ;
” နိုင်ငံရေးသမားတွေ အနေမတတ်ရင်..(အဆုံးစွန်ပြောရရင်) တိုင်းပြည်က.. နေရင်းထိုင်ရင်း.. မဟာအင်အားကြီး၂ခုကြား..ကြားညှပ်သွားလိမ့်မယ် ”
I don’t know about who will win or lose.
But, I am definitely sure,
” Our Mother land cannot be developed with wars ”
” People & properties ( would be lose in this war ) all are Myanmar ”
One experienced Military Officer said to me ;
Wa & Ko Kang ( Former Ba Ka Pa/BCP ) are the most fearsome rebel they have ever encountered & especially, they are better in gunnery ( A Myauk ).
But, fortunately, Our Military Regime know it very well (apparently),
They already madeatruce with “Wa & Moung La”
( specially & separately done to this special two ).
May be, they try to eliminate Kachin, Kayin & Shan first &
They don’t want to touch “Wa & Moung La” ( ပါပါ (China) step sons )
I think I already explained my ideas enough in my article & my comments.
I think, I don’t need to ( repeatedly ) explain again, enough.
I just want to highlight my main ideas & saying :
– In this particular event, Chinese didn’t make mistake.
– In recent Era, you cannot constructadeveloped nation with “ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု ”
“ သူတို့ကိုအပြစ်ပြောနေမဲ့အစား သူတို့ဒီအလုပ်ကို ဘာကြောင့်အောင်မြင်တယ်။
“ လူဦးရေ စီးဆင်းရွေ့ပြောင်းမှုတွေကို.. တားဆီးလို့ အင်မတန်ခက်တဲ့ ..ရာစုနှစ်ထဲရောက်နေတာကိုး ”
I will stand together with my beloved “Myanmar People”.
as I am Myanmar now & possibly forever.
But, I want Myanmar Society to be righteous.
Ok, this is my personal opinion only,
“ Kachin, Shan & Kayin hate Myanmar more than Chinese ”
our country was really crying & calling for her sons ……..
But, I didn’t reply enough ( enough ) for my beloved mother land.
I could not abandon my prosperous career / future ( my selfishness ).
Our generation cannot handover good situation to our younger generation.
Our younger generation are suffering & outcry.
“ကျွန်တော်တို့သည်သာ အဓိက တရားခံများ ဖြစ်ပါသည်”
My beloved motherland, I owe you.
I promised, One day, I will.
We ( မိရိုးဖလာ တရုတ် ) used to stay low profile,
We even dissolved/cooperate to Myanmar community &
We even changed our religion to ” Htay Ya War Da Buddhism “.
We totally feel, We are Myanmar.
But, those new comers “Wa, Koe Kang & ပြည်မကြီး” are not.
Let say, they are rude & arrogant.
But, it is difficult to blame them “Wa, Koe Kang & ပြည်မကြီး”.
Because, they are already rebel & uneducated & barbarian.
“RUDE & ARROGANT” is their traditional manner.
There is only one wrong thing.
Those uncivilized barbarian rebels were allowed to come to civilized cities.
The main wrong doer is
“Everybody’s beloved our Military Regime”
They asked, invited & welcomed them.
– Don’t forget, your country is very poor.
– For your information,
Even Australia is not rich enough to preserve its environment.
အိန္ဒိယ နိုင်ငံက လျှပ်စစ်ဓါတ်အား အများစု ရရှိမှာ ဖြစ်ကြောင်း
NHPC ကုမ္ပဏီ ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Bhargava က ပြောကြားသွားပါတယ်
CPI ကုမ္ပဏီ is onlyacommercial company.
If stupid Myanmar Government allow & there isachance of profit,
China or India or Thai or Bangladesh will come.
CPI or PCI or ICP or CIP oralot of companies will come.
It is unavoidable or inevitable.
Not only China,
India & Thai all together bully ( အနိုင်ကျင့် ) to Myanmar.
I think, Bangladesh will join soon.
Now you may see,
Not only China, every neighboring countries bully ( အနိုင်ကျင့် ) Myanmar.
Now, you can understand the meaning of ;
But, I don’t want to see “လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေ”
I think it is good for nothing, either Myanmar or Chinese.
I also appreciate to those villagers who contribute their opinion in my article.
I am really really delight to get 217 Hits & 85 comments in my article, within2days.
Moreover, my article got 10 positive thumb up ( so far ).
Kindly let me highlight their constructive comments.
ကျုပ်တို့နိုင်ငံ ( ကျုပ်တို့နိုင်ငံသား အများစု ) ဆင်းရဲလို့
ဆင်းရဲတဲ့သူဟာ အနိုင်ကျင့် ခံရတတ်တယ်
ကျုပ်တို့နိုင်ငံကို ဆင်းရဲမှု့က လွတ်မြောက်စေဘို့ နည်းလမ်းရှာရမှာ
နောက်အနှစ်၂၀-၃၀လောက်ဆို.. တကမ္ဘာလုံး တရုတ်မှတရုတ်ဖြစ်ကြတော့မှာပါ..။
အနောက်နိုင်ငံကအဖြူတွေ (ကော့ကေးရှန်းတွေ) ကို.. ကမ္ဘာကဆက်ဆံကြသလို…
ကိုယ်ကဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့ (ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့).. တရုတ်ပြည်ဖက်လှည့်အော်ဆဲနေတာမဟုတ်ဖူးလေ…
– တကယ်တမ်း အသုံးမကျတာက တရုပ်တွေထက် ကိုယ့်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့ ကိုယ့်အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ယူထားပြီး မှန်ကန်စွာ မကာကွယ်နိုင်တဲ့သူတွေပါပဲ
ကျုပ်လဲ တရုတ်သွေးနှောတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်။
တကယ်တော့ ဘယ်နိုင်ငံကဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကို မတရား စစ်ပြုလာခဲ့ရင်-
အခြား မြန်မာပြည်ဖွား မည်သူမဆို အားလုံးနီးပါး ဒီသဘောပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံကမှ မြန်မာနိုင်ငံကို မတရား စစ်မပြုလာသေးခင်မှာတော့-
အကျိုးမဲ့တဲ့ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှု့တွေ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။
ဒီအမှားကိုပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ မဆင်ခြင်မသုံးသပ်နိုင်ဘဲ မကျူးလွန်မိစေဖို့ ပဲ (သင်ခန်းစာအဖြစ်မှတ်ယူပြီး) အရေးကြီးတာ။
– စည်းလုံးညီညွတ်မူ မရှိသော ၊ တိုက်တုန်းခိုက်တုန်း ၊ သည်းခံစိတ်မထား ကွဲစရာပြဲစရာဖြစ်အောင် ဆဲကောင်းကြတုန်းဖြစ်ပါသည်
– ဒီလို အသုံးမကျသော ၊ ကိုယ့်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့ ကိုယ့်အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ယူထားပြီး မှန်ကန်စွာ မကာကွယ်နိုင်တဲ့သူများကို မဖယ်ရှားနိုင်သော
– ကာကွယ်ပေးမည့်သူများကို မတင်မြှောက်နှိင်သော
– စီးပွားရေး ကောင်းမွန်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မည့် အစိုးရကို မတင်မြှောက်နှိင်သော
– ကျွန်တော်တို့သည်သာ အဓိက တရားခံများ ဖြစ်ပါသည်
– ကိုရင်ပုအဖေကသူပိုင်အိမ်ကို အိမ်တိုင်ချွတ်ရောင်းတာ
– ဒီတယောက်မ၀ယ် နောက်တယောက်ဝယ်မှာပဲ
– နောက်တယောက်မ၀ယ်လည်း နောက်တယောက်ဝယ်မှာပဲ
– ၀ယ်သူကိုမ၀ယ်နဲ့ပြောလို့မှမရပဲ ကိုယ့်အဖေကိုပဲမရောင်းဖို့ပြောရမှာမဟုတ်လား
– ၀ယ်သူကမှားတာလား ကိုယ့်အဖေကမှာတာလားသေချာလေးပြန်စဉ်းစားပါအုန်း
– အနောက်နိုင်ငံ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေက သူတို့အစိုးရတွေရဲ ကြပ်မတ်မှုကြောင့် မြင်နေရတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို လစ်လျူရှုနေရချိန်မှာ တရုတ်က ဝင်အမြတ်ထုတ်တယ်။
– လူဆိုတာ အတ္တမျိုးမိုလို့ ချမ်းသာလာရင် အဆင့်အတန်း ခွဲကုန်တယ်။
– ဒါတွေကို ချမ်းသာလာတဲ့ဖက်က ကိုယ့်ရွှေခွက် မပျောက်အောင် သဘောပေါက်ရမယ်။
– ထိုင်းနယ်စပ်မှာ နှစ်စဉ်လုပ်တဲ့ တရုတ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဆန်လှူပွဲသည် အရမ်းကောင်းတယ်။
– ငါတို့မင်းတို့ ထင်သလို မဟုတ်ဘူးလို့ စုပေါင်းပြီ မလုပ်ပြနိုင်ဘူးလား။
ပြဿနာက ကျုပ်တို့နိုင်ငံ နဲ့ ကျုပ်တို့နိုင်ငံသား (အများစု) ဆင်းရဲလို့ ……..
ဆင်းရဲတဲ့သူဟာ ကောင်းတာလုပ်နိုင်ဘို့ အခွင့်အလမ်းနည်းပါးတယ်..
ဆင်းရဲတဲ့သူဟာ အနိုင်ကျင့်ခံရဘို့ အခွင့်အလမ်းများတယ်..
လက်ညိုးထိုး၊ သူ့အပြစ် ကိုယ့်အပြစ်တွေကို ဘေးဖယ်ထားလိုက်ပြီး
ဘာ လုပ်သင့်တယ် တယ် ဆိုတဲ့ အဆင့် ကို တက်သင့်ပါပြီ။
I also appreciate မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ကိုရင်အောင်ပုဆဲတာ..( စေတနာပါတယ် တွက်မိတာမို့..) နားလည်ပါကြောင်း..။
At last, but, not the least,
Thanksalot, Sayar Kai (သဂျီး )
for allowing to post this serious article & comments.
( I think, yesterday, MG was hanged because of our reply comments & interested viewers )
I believe, all of us are “ မြန်မာပြည်ကို.. ချစ်ကြတာချင်းအတူတူသမားတွေ ”
နိုင်ငံကြီးတိုင်းကတော့ သြဇာလွှမ်းမိုးရေးဘဲလေ ဒါကသူတို့အလုပ်ဘဲ
လုပ်ပါလား အမေရိကန်လို ဘာဖြစ်လို့မလုပ်လဲ
လုပ်ရင်သူတို့လည်း သဂျီးလို အကြွေပတ်လည်ဝိုင်းသွားမှာပေါ့
အရပ်စကားဘဲဗျာ ဆဲတာကိုမှ ထုပ်ပြီးအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပြီး ပြောတာကတော့လွန်တာပေါ့
ဆဲတာကိုဖယ်လိုက်ပြီး အခြားစကားတွေကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြပါလား
ခင်ဗျားဖောင်တိန်လေး ကျုပ်လုတာ ဒီလောက်စိတ်ဆိုးနေရင်
ခင်ဗျားကျုပ်တို့ နိုင်ငံကြီးကို သိမ်းပိုက်ထားတာ ကျုပ်တို့က ပိုပြီး စိတ်ဆိုးရမှာ
ကျုပ်တို့နိုင်ငံသယံစာတတွေကို အာဏာရှင်တွေနဲ့ ပေါင်းထုပ်တာကို
ဒီချိန်မှာ ကျုပ်လုပ်နိုင်တာက ဆဲတာတစ်ခုဘဲရှိတာဂိုး
ခင်ဗျားတို့ကို ကျုပ်က မြန်မာပြည်သား မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ဘဲမှတ်ယူထားတယ်
နိုင်ငံရေးအရ ဆဲတဲ့တရုပ်တွေပါဗျ အဲ့သည်စီမံကိန်းမှာ သာမန်အလုပ်သမားအဖြစ်ပါလာတဲ့
တရုပ်နိုင်ငံသား အစစ်တွေကိုတောင်ဆဲစရာ မရှိဘူး သူလည်းပြည်သူဘဲဗျ
ကျုပ်ဆဲတယ်ဆိုတာ တရုပ်အစိုးရပေါ်ရစီကိုဆဲတာ ခင်ဗျားတို့က
တရုပ်အစိုးရနဲ့ အတင်းအမျိုးလိုက်စပ် ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခင်ဗျားတို့ တရုပ်တွေဘာတွေဆိုပြီး
ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခင်ဗျားတို့ ကရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် မွန်ဘဲဖြစ်ဖြစ်
တရုပ်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ကလားဘဲဖြစ်ဖြစ် ခင်ဗျားတို့ဟာ မြန်မာတွေပါဗျ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မြန်မာလို့မခံယူနိုင်ရင် ဒီအကြောင်းတွေကို လာဝင်မပြောနဲ့
ဒါ့ကြောင့် ခင်ဗျားတို့ အဘတွေ တရုပ် ကလားကျုပ်မသိဘူး
ခင်ဗျားတို့ ဟာ မြန်မာတွေဘဲ
( မြန်မာ့သွေးဟေ့ ငရုပ်သီး ဟုတ်ပါဘူးယောင်လို့ မြန်မာ့သွေးဟေ့နီစေတယ်
ဒို့ပြည်ကို ဂုတ်သွေးလာစုပ်တဲ့ တေဂျင်းဂျိုး တရုပ်တွေ မအေယိုး တရုပ်တွေ
ယီးဘဲ ယီးဘဲ ဟဲဟဲဟဲ )
( ပစ္စည်းမဲ့ဒေါသဖြစ်နေတတ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ )
ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ သစ္စာဖောက်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ကိုယ့်ပြည်ထည်းက သံယံစာတတွေကို
ဒီလိုဆို မတရားမှု့ကို ဆန့်ကျင်သူတွေက
မအေလိုးလို့ ဆဲလိုက်တာထက် ပိုပြီးရိုင်းဆိုင်းတယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ
အင်း တရုပ်မုန်းတီး ရေးလှုံ့ဆော်ရေး တွေ site ထဲ ကိုအလုံးအရင်း နဲ့ account အမျိုးမျိုး နဲ့ရောက်လာ ကြတယ် ။ စဉ်းတော့စဉ်းစား စရာပဲ ။ တရုပ်ကို မုန်းမှ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တာ မဟုတ်ပါ ဘူး ။ ( မည်သူ့ကိုမှ ပြန်လည် ဖြေကြား မည် မဟုတ်ပါ ။ အချိန်သိပ် မပေးနိုင်ပါ )
” တရုပ်မုန်းတီး ရေးလှုံ့ဆော်ရေး တွေ site ထဲ ကိုအလုံးအရင်း နဲ့
account အမျိုးမျိုး နဲ့ရောက်လာ ကြတယ် ။
စဉ်းတော့စဉ်းစား စရာပဲ ”
It can be political move. Think & be careful.
မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ခြင်းကို မိမိတို့အစိုးရလက်ထက်တွင် ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက လွှတ်တော်သို့ သ၀ဏ်လွှာ ပေးပို့
( Eleven News )
I start to appreciate/believe our president U Thein Sein.
ပြည်သူအများကို အတိဒုက္ခမရောက်စေချင်တဲ့ စေတနာကို တတ်နိုင်သမျှ မြင်အောင် ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကိုဂျော်လနီအဲယောင်လို့ ကိုဂျော်နီအောင်ပု ဖက်ကပြောပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး
ဒါကြောင့် စကားလုံးတွေ ကြမ်းလာတယ် ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
သူကြီးကိုယ်တိုင် “ဘယ်မအေ ရိုးမှ မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ ” ပို့စ်တစ်ခုတင်ဘူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ရိုင်းတယ်လို့ မမြင်မိပါဘူး။ ဖြစ်စေချင်တဲ့စေတနာလွန်ကဲသွားတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ သူက လိင်တူချစ်သူ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့စိတ်ထဲ စိတ်ကူးထဲ အဲဒါကြီးပဲ အမြဲမြင်နေပြီး ဒေါသဖြစ်တုန်း စာရေးနေခိုက် ယောင်ယောင်ပြီး ပေါ်ပေါ် လာလို့ ရေးထဲထဲ ထွက်ထွက်သွားမိတာပါ ။း)
စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရ ရဲ့ အရသာကို စပြီးခံစားရပြီ။ ပျော်လိုက်တာ။ ဝေးးးးးးးး။
ကျွန်တော် ဟာ တရုတ် ဗမာ ကပြားပါ။ တရုတ်သွေး ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပါပါတယ်။ ကျွန်တော့်အဖေရဲ့အဖေက တရုတ်စစ်စစ်ပါ။
(ဒါကတော့ မြင်မှမမြင်ရတာ ကိုယ်ပြောချင်သလို ပြောလို့ ရတာပေါ့လို့စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။
ဒီလိုထင်နေရင်လည်း ကျွန်တော့်အနေနဲ့ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး)
ဒီစကားကို အရင်ကတည်းက ဘာလို့ မပြောလဲဆိုတော့ မထင်မှတ်တဲ့ စကားလုံး ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ရှိသွားနိုင်လို့ ပါ။
အခုဘာလို့ ပြောသလဲ ဆိုတော့ အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ရှင်းချင်လို့ ပါ။
ကျွန်တော် ဟာ အခုပြောနေတဲ့ (ပြည်မ) တရုတ်ကို မျက်ကန်း မုန်းတီးနေသူတစ်ဦး မဟုတ်ပါဘူး။ မုန်းတီးနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း( ပြည်မ)တရုတ်ထဲက ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် မုန်းတီးနေမိတာ မဟုတ်ပါဘူး။
အခွင့်အရေးပေးတိုင်း (ကျင့်ဝတ်မထိန်းဘဲ) ရသမျှ ယူချင်နေတဲ့ တယုတ်ကို (ဒီနေရာမှာ ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်) မုန်းတီးနေမိခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ သဂျီး ပြောသလို ဘာမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံရေး စနစ်ရှို့ ပြီး မှိုင်းလာတိုက်ရုံနဲ့မုန်းတီးနေမိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ မှိုင်းတိုက်လိုက်ရုံနဲ့ယုံလွယ်တဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့လူစားမျိုးထဲမှာလည်း ကျွန်တော်မပါပါဘူး။ ဒီလိုဘဲ ပြည်သူလူထုအများစုလည်း မပါပါဘူး။ ကိုယ်ကျိုးရနေတဲ့ လူနည်းစု တစ်ရပ်ကလွဲရင်ပေါ့။ မှိုင်းတိုက်တိုင်းသာ ပြည်သူလူထုယုံလွယ်ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယခင်စစ်အစိုးရက မကောင်းမြင်ဖို့ ရာမှိုင်းတိုက်ခဲ့ကြတယ် ပြည်သူလူထုက ဘာလို့ မယုံခဲ့လဲ။ ဂဌုန်ဇော်မင်း သတင်းစာထဲက မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး မှိုင်းတိုက်ခဲ့တယ် ပြည်သူလူထု ဘာလို့ မယုံခဲ့သလဲ။စဉ်စားကြည့်ကြပါအုံး။ အိုကေနော် ကျွန်တော်က (ပြည်မ) တရုတ် မုန်းတီးရေး ၀ါဒ လာဖြန့် နေတာ လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ်လို့သဂျီးပြောလိုက်တဲ့ ဒီစကားရပ်
(နိုင်ငံရေးသမားတွေ အနေမတတ်ရင်..(အဆုံးစွန်ပြောရရင်) တိုင်းပြည်က.. နေရင်းထိုင်ရင်း.. မဟာအင်အားကြီး၂ခုကြား..ကြားညှပ်သွားလိမ့်မယ်..။ )
ကိုတော့ဖြင့် အပြည့်အ၀ ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အနေမတတ်ရင် တရုတ်ဖြစ်ဖြစ် ၊ အမေရိကန်ဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ခေတ်သစ် ကိုလိုနီ ပုံစံထဲ ကျသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ ယခုအစိုးရကအစ ပြည်သူအဆုံး သတိပြုမိ ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာကို နည်းဗျူဟာ အရ အသုံးချနေတဲ့ (ယခု တရုတ်ကအများဆုံး အသုံးချပြီး) တရုတ်ကိုရော ၊ အမေရိကန်ကိုရော မုန်းတီးမိနေတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူ ဘာအပြစ်ပြောချင်ပါသလဲ။
ဒီထဲမှာ တစ်ခုအမြတ် ရရမှာ က အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးသာ ရရင် ဘယ်အရာကိုမဆိုတိုက်ထုတ်သွား နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး အမြတ်ပါဘဲ။ ယခုလည်း အားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်ကြလို့အောင်ပွဲ ခံနိုင်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ကာ လူတွေက ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ကောင်းရင် ခေါင်းမရွေ့ ဘူးဆိုတာ။ ဒါက ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမမှန်ပါဘူး။ ဒီစကားရပ်ကို ဆန့် ကျင်နေတဲ့ စကားရပ်ကတော့ နှဲ့ ပါများရင် နဲ့ တတ်တယ်တဲ့။
အဲဒီတော့ ကိုယ်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း (ယခုဒီမိုကရေစီအစိုးရ) နည်းဗျူဟာအရ အရေးပါလှတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဆွယ်လုံးအမျိုးမျိုးပေးပြီး သူတို့ ကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချတဲ့ တရုတ်ရော၊ အမေရိကန် ကိုရော ဘယ်လိုမှ မနှစ်မြို့ နိုင်ပါဘူး။အထူးသဖြင့် တရုတ်ပါ (မှိုင်းတိုက်တယ် ထင်ရင်လဲမတတ်နိုင်ဘူး ) ။ တရုတ်နဲ့ဆက်နွယ် (အကျိုးတူပူးပေါင်းတယ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး) တဲ့ အာဖရိကဒေသ၊ လစ်ဗျား၊မြောက်ကိုရီးယား၊ အီရန်၊ မြန်မာ( ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်) ဘာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြသလဲ။ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးဘယ်ဟာ များခဲ့သလဲ။ စာများများဖတ်ပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြည့်ကြပါ။ နာဂစ်ဖြစ်တုန်းက ဘယ်သူဘယ်လောက် ကူညီခဲ့သလဲ (တရုတ်မှာ ငလျင်လှုပ်တာရောလို့မပြောနဲ့ နော်၊ ငလျင်မလှုပ်ခင် နာဂစ်ကြိုဖြစ်တာပါ၊ ကူညီမယ်ဆို နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ အနီးဆုံးတရုတ်ပါ) ၊ ကူညီဖို့ လာတဲ့ အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုကို နည်းဗျူဟာအရ တားဆီးပိတ်ပင်ခိုင်းခဲ့တာ ဘယ်နိုင်ငံပါသလဲ။ ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအတွက် ပို့ လိုက်တဲ့ တရုတ်ပစည်း သံချီးတက်နေပါလေရဲ့ ။ ပို့ လိုက်တဲ့ ရထားတွဲတွေ စုတ်နေပါလေရဲ့ ။ကြီးထွားလာတဲ့ စစ်အင်အားနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ အာရှဒေသကို မခြိမ်းခြောက်ပါဘူးလို့တွင်တွင်ပြောပြီး ကိုယ်နဲ့ ဝေးကွာလှတဲ့ ရေပိုက်နက်အငြင်းပွားမှုကို စစ်ရေယာဉ်တွေ လွှတ်နေခဲ့တာ ဘယ်နိုင်ငံပါသလဲ။
ကဲ ဒါတွေကို သိနေတဲ့ (စာဖတ်လိုက်ရလို့ ) လူတစ်ယောက်အနေနဲ့(ပြည်မ) တရုတ်အစိုးရရဲ့လုပ်ရပ်ကို (မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး) ဆန့် ကျင်နေမိတာ ဘယ်နားမှာ မှားသွားလဲ။ (အရာအားလုံးကို အကောင်းမြင်နေတဲ့လူက လာပြောရင်တော့ လက်ခံလိုက်မယ်၊ ဟိုလူကျတော့ မကောင်းဘူး၊ ဒီလူကိုတော့ ဒါလေးဘဲ အပြစ်မြင်စရာမရှိဘူးလို့လာပြောရင် တော့ very sorry တောကြီးမြိုင်လယ် ပါဘဲ။)
ပြီးတော့ ကာ ကိုယ့်နှမ၊ အမတွေကို သူတို့ ရဲ့ချစ်သူဖြစ်ဖြစ် ၊ ရည်းစားဖြစ်ဖြစ် ကာမကိုလိမ်လည် ရယူ ပြီး စော်ကားဖျက်ဆီးလိုက်ရင် (ယခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ ကော်ဖီမစ်၊ ပီကေလိုဟာမျိုးတွေ အသုံးချပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်နှမ အစ်မက လိုက်လျောလိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်) ဒီလူကို ဒေါသမထွက် မမုန်းတီးရဘူးလား။ နှို့ မှုန့် ပြသနာဖြစ်တုန်းကရော သောက်သုံးမယ့်လူတွေကိုပဲ ဘာလို့ သောက်သုံးကျလဲ ၊ ဒါလေးတောင် မသိဘူးလား ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်သောက်သုံးကြပါလားလို့အပြစ်တင်ကြပါလား။။ ဘာလို့ကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီတဲ့ ထုတ်လုပ်သူတွေကို သေဒဏ်ပေးခဲ့ရသလဲ။ ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ အပြစ်ရှိသူကို အပြစ်ပေးတာပေါ့။ သိပ်ကိုအကောင်းမြင်နေတဲ့သူရှိရင် သွားပြောကြလေ၊ သူတို့ မှာ အပြစ်မရှိဘူး ၊ စီးပွားရေးအရ မြတ်လို့ လုပ်တာပဲလို့ ။ သည်းမခံသင့်တဲ့အရာကို သည်းခံရင် ခေါင်းပေါ်တက်လာလိမ့်မယ်။ အပြစ်လုပ်သူကို လုပ်ရင် လုပ်ကြောင်းပြောရမယ်။ ကိုယ်နဲ့ ဆိုင်သူမို့ ၊ ကိုယ့်အမျိုးမိုလို့ ၊ ကိုယ့်ချစ်သူမိုလို့အပြစ်မပြောဘူး ဆိုရင်တော့ ဒီလူ့ လောကကြီး ဘယ်တော့မှ တိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ လူရယ်လို့ လဲ မသတ်မှတ်သင့်တော့ ဘူး။ ဒါပါဘဲ CPI နဲ့တရုတ်အစိုးရကို မကောင်းမြင် (ဒေါသထွက်) ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း။
(To becomeadeveloped nation, you have to sacrifice some things.)
(I also want to preserve “ မြစ်ဆုံ” as national heritage.)
OK, this is quite different.
ကိုယ်အလေး အမြတ်အထားဆုံး အရာကို ဘယ်လောက်ငွေကြေးပမာဏ နဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာအကြောင်းအရာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် မစတေးသင့်ပါဘူး။ ကိုယ်အလေး အမြတ်အထားဆုံး မိဘ၊ သားသမီးကို ရောင်းစားခံရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။
ဘာမှိုင်းမှ မတိုက်ခဲ့သလို ၊ ဘာမှိုင်းမှလဲ အတိုက်ခံမယ့်သူမဟုတ်ဘူး။
Your comments areabit more acceptable (if true about your heritage) than Michael Johnny Aung’s ‘Nazi’ comments.
‘Nazi’ = DNSAP — Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (the party of Adolf Hitler)
တရုပ်တွေ ကုလားတွေ အင်္ဂလိပ်တွေ ကပ္ပလီတွေအသာထားအုံး
သုဝဏ္ဏကွင်း ၃း၀၀ပွဲမှာ ဖိုက်နေတာရခိုင်နဲ့ ဗမာတဲ့
ဧရာတီအတွက် တိုက်နေကြတာ …………..
I cannot catch your meaning.
အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပါ။ အကြောင်းနှင့် ကင်းသော အကျိုးတရားသည်မရှိလို့ ဘုရားကဟောခဲ့ပါတယ်။ အခုဒီကိစ္စ ဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ။ MGပေါ်
ရောက်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ရောက်လာလဲ တွေ့တဲသူရှိလို့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့တွေ့တာလဲ။ ဖြစ်လို့တွေ့တာပါ။ ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲ ပန်ကာက ရေပိုက်ခေါင်းကို လာတိုက်မိလို့ပါ။ ပန်ကာကဘာဖြစ်လို့ပြုတ်ထွက်တာလဲ။ ပန်ကာမပြုတ်ရင် ဒီကိစ္စ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပန်ကာပြုတ်တယ်ဆိုတာ အင်မတန်ဖြစ်ခဲပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ယာဉ်တွေကို ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းရေး ဗဟုသုတ အားနည်းလို့ထင်ပါတယ်။
၀ိုင်းစုနားရောက်သွားတဲ့ FR ကို အားထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (94 comment)
By the way, what’s the meaning of
” ၀ိုင်းစုနားရောက်သွားတဲ့ FR ”
Kindly, explain me.
Anyway, that sounds good “၀ိုင်းစုနားရောက်သွား”
၀ိုင်းစုနားရောက်သွား is definitely better than “Ogre နားရောက်သွား”
င်္FR ရဲ့ အယူအဆတွေကို သဘောကျပါတယ်။ MG မှာ home ကိုသွားရင် recent, popular,unanswered,ramdon ဆိုပြီး tap ၄ခုရှိတယ်။ ပေါ်ပြူလာဆိုတဲ့ စာမျက်နှုာ မှာ အခုထိ အများဆုံးရတဲ့ ကွန်မန့်တွေရှိသူတွေကို တင်ထားတယ်။ အခု FR က MG မှာ အဓိပါယ်ရှိသော ကွန်မန့်များဖြင့် အဆင့် ၄ ရောက်နေပြီးလို့ ဂုဏ်ပြုတာပါ။
==၀ိုင်းစုရဲ့ စကပ် ဒီထက်ပိုပြီးတိုခဲ့မယ်ဆိုရင် –Dave –105 ကွန်မန့်
==ရေကူကန်ဘေးမှ တင့်တင့် နှင့် အူဝဲ နှစ်ယောက် အလှချင်းပြိုင်၊ဘယ်သူ ပိုချောလဲ၊ ——မဲပေးလိုက်ရအောင်။- Bayote-105 ကွန်မန့်
==မြန်မာတွေကို အနိုင်ကျင့်ကုန်ပြီ Who made it ???–Foreign Resident-၁၀၁ ကွန်မန့်
Thanks Nature for your flattering comment.
The best part is “အဓိပါယ်ရှိသော ကွန်မန့်များဖြင့် “
FR ကို ၀ိုင်းစုနဲ အူဝဲ ကြားရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်ဦးမယ်။ဒါမှမြန်မာပြည်ပြန်လာရင night club မပို့ရမှာ။ ၀ိုင်းစုနဲ့ အူဝဲကွန်မန့်တွေက အနှစ်သာရ ရည်ရွယ်ချက် အတွေးအခေါ် အကျိုးမရှိပါ။ အတုယူစရာ မရှိပါ။ FR ရဲ့ ကွန်မန့်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်တာ သတိပြုမိလို့ အမှန်အတိုင်း မြင်တဲ့အတိုင်း ရေးပေးလိုက်တာပါ။
Now, I am exactly between ၀ိုင်းစု, တင့်တင့် နှင့် အူဝဲ
I think this isaquite comfortable & cozy place for me.
BTW, I got 15 thumb up ( especially, No thumb down ),
360 hits & 111 comments.
Thanks to all villages.
ဖတ်ရတာ များလိုက်တာ .. အားရစရာလည်းကောင်းတယ် .. ဒွိဟတွေလည်း တွေ့တယ် .. ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှအမြင်မရှိပါဘူး .. ခုထိ ဘာမှလုပ်နိုင်တာ မရှိသေးဘဲကိုး ….. ဒါပေမယ့် ..
တကယ်လို့များ ကျွန်တော်သာ .. အခွင့်အရေးရခဲ့ရင် .. တကမ္ဘာလုံးကိုသိမ်းပစ်မယ် .. တကယ် …
ပီးတော့ အဲ့နိုင်ငံကို ကမ္ဘာလို့ အမည်ပေးမယ် .. ပြည်နယ်တွေက များကြီး .. မြန်မာတို့ တရုတ်တို့ ယိုးဒယားတို့ ပေါ့ .. တကမ္ဘာလုံး ကငွေကြေးတွေက်ိုလည်း တစ်မျိုးတည်း ပြောင်းပစ်မယ် .. dna နဲ့ REGISTER လုပ် ခိုင်းမယ် ဒါဆို နိုင်ငံမရှိတဲ့လူ လည်း မရှိတော့ဘူး .. . ကမ္ဘာမှာနေပီး မြန်မာနိုင်ငံလေးကိုပဲ ပိုင်နေရတာ သေးတယ်လို့ထင်တဲ့သူ တွေ သွားချင်တဲ့နေရာလည်း သွားလို့ရပီ (No visa No Passport) လူကုန်ကူးတာ၊ နယ်စပ်ဒေသ မဖွံ့ဖြိုးတာ တွေလည်း နည်းပါးသွားမယ် .. လို့ အိပ်မက်မြင်မက်မိပါကြောင်း ..
Dear F/R ဆရာ့ပို့စ်ဖတ်ရတာ ကွန်မင့်တွေပေါ့နော်။ တစ်ခေါင်းလုံး ချာလည်ချာလည်မူးပေါ့။ ဆရာ အင်္ဂလိပ်စာ အရေးကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာရေးသမျှ ကျွန်တော် အလွတ်မပေးဘဲ အမြဲဝင်ဖတ်နေတာပါ။ တဆိတ်ဆရာ ဆရာရေးတဲ့အထဲမှာ ဟိုးအရင်ကတည်းကနေ အခုထိ အမြဲတမ်း Let say လို့ ရေးတယ်။ Let’s say မဟုတ်ဘူးလား။ အဓိပ္ပါယ် မတူဘူးနော်။ ဆရာက မြန်မာလို — ဆိုကြပါစို့— လို့ပြောချင်တာလား။ အဲဒါလေး ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေလို့။ ပို့စ်နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူး။
Sorry, တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေရင်း ရှုံးနိမ့်နေသူတစ်ဦး။ ,
You are correct. “Let’s Say”
“ဆရာ အင်္ဂလိပ်စာ အရေးကောင်းတယ်”
I can barely write broken English &
a lot of basic grammar mistakes there, you can see it in my writing.
Let’s say, our “Mariner’s/Seaman’s” English is not too high,
Because, in Foreign,
People from high society do not want to work in our Marine Industry.
Because, our job can be said as “3D” job (difficult, dirty & dangerous).
So, we normally met & deal only with medium or low class people
( Blue collar / hard labour ).
In this situation, “Broken English” is enough &
the worst is, even you want to arise your “English”,
they will/can not accept/catch you.
If you say “I went to the Supermarket (yesterday)”,
they “sailors & stevedores” confuse “went” with “want”
“I go to the Supermarket (yesterday)” is clearer for them.
your English cannot be improved from “your initial standard”.
ရွာထဲမှာ ပေါက်ပေါက်ဖောက်နေကြတာ တစ်ယောက်တစ်မျိုး မရိုးနိုင်အောင်ပဲ။
အားလုံးကိုဖတ်ပြီး ကောက်ချက်ချမိတာက ဖောရိန်းကြီး ရေးတာ သဘာဝကျတယ်။ ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို ရှာပြီး ဘယ်သူမှားလဲ၊ ဘယ်သူမှန်လဲ ဆိုတာကို ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မှန် စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ ပြဿနာတိုင်းမှာ တရားဓမ္မနည်းကျကျ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းရှိတယ်။ အဲဒီကြားထဲမှာ အရောင်တွေ ဆိုးမထားဖို့ပဲ လိုတယ်။ (လူမျိုးရေး၊ နိုင်ငံရေး စသည်ဖြင့် အတ္တစွဲ အရောင်တွေ)
BTW, you might like to consider this tool, if you have time.
in ga late loathan htwak mha
myan mar lo ye naing
May be rather slow and cumbersome when compared with English typing. Building word by word.
Googling “Burmese typing” might result in many other choices.
FR ရေ- Myittha ပေးတဲ့ အပေါ်က လင့်ခ်လေးကို သုံးကြည့်ပါ။ ကိုယ်တိုင်တော့ သွားဖွင့်ကြည့်ပြီး စမ်းပြီးသွားပြီ။ တော်တော်ကောင်းတဲ့ လင့်ခ် လေးပဲ။ အကျိုးရှိတယ်။ အားလုံးရဲ့ ကိုယ်စား Myittha ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အကျိုးရှိတယ်လို့ ကြားရတာ ဝမ်သာလိုက်တာ
Now, I use your web page to write Myanmar Font.
တော်တော်ကောင်းတဲ့ လင့်ခ် လေးပါ။ အကျိုးရှိပါတယ်။
“Myittha” ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖတ်၍ ကောင်းပါသည်။ ဗဟုသုတ တိုးပါသည်။
ဆက်၍ ရေးပါခိုင်… အဲလေ ဆက်ဆွေးနွေးကြပါခင်ဗျား………